RAW: kurt Angle oo Furay Bandhiga RAW – Filimside.net
RAW: kurt Angle oo Furay Bandhiga RAW
Xalay waxaa bilaabmay shake up ka oo aha hadal haynta bandhiga iyadoo la filayay in xidigo ka yimaadan smack down live.
Angle aya taageerayaasha ku soo dhaweeyay bandhigiisa Monday night Raw . isagoo hadalkiisa data waa arbushay sunil Singh isagoo soo bandhigay shake up ka ugu horeeya ka yimaada smack down live oo uu noqday United state championship Jinder Mahal .
Jinder aya sheegayaa inuu mudan yahay in loo soo xusho bandhigan oo uu ka fiican yahay xidigaha jooga dhamaan Raw loona xushmeeyo sida brock lesnar loo tixgaliyo .
Angle ayaa jinder u sheegaya haduu ka fiican yahay dhamaan xidigaha Raw waa inaad ku cadaysaa Ringaha Angle aya xidigaha Raw ka Codsanaya in qof ka mid ah uu imaado ina u la ciyaaro Jinder oo ah meesa in ay taalo suunkiisa United state championship.
Jinder mahal ayaa ka caroonaya isagoo dhahayo inuu u diyaarsanayn inuu ciyaaro laakiin waa laga diidayaa. Ka dib waxaa soo yeeraya musicada Jeff Hardy oo aqbalay inuu la ciyaaro isagoo is keenaya goobta.
Kadib waxaa dhaxmaraya ciyaar xiiso badan labadooda ugu dambayn Jeff hardy ayaa mahal ku dhufanaya action ka the Twist of Fate ka dibna Raacsiinaya action ka Swanton ka dibna waxa uu ku guuleysanayaaa oo uu noqonaya New united state championship isagoo noqonaya grand slam oo ah inuu qaaday dhaamaan suumanka.
Jinder Mahal ayaa dhiganaya Rematch kiisa bandhiga weyn ee ka dhici doona Saudi Arabia 27 April ee ah The Greatest Royal Rumble.
Waxaa Aqrisay 148